Lapho usebenzisa isevisi "VKontakte" abantu abafuna ukuthola umngane, ngoba lokhu kukhona izindlela ezimbalwa. Ukusetshenziswa zokuxhumana ngokuvamile kuxhomeke ekutheni kungenzeka ukuxhumana phakathi abantu bekude nganoma yisiphi isikhathi. "VKontakte" Kulula kakhulu ukukwenza: wena nje ube ne-akhawunti. Kule ndaba umbuzo yemvelo kuphakama: indlela yokuthola umuntu "VKontakte"? It kuyafaneleka ukucabangela le nkinga ngokuningiliziwe.
Okokuqala, ake aveze ukuthi kungenzeka nokuhlukile lapho abantu besesha "VKontakte" ngaphandle ukubhaliswa. Kungani-ke, futhi kungani hhayi ujoyine inethiwekhi? Ake sithi umsebenzisi asikho isidingo salokhu, noma akafuni obala intshisekelo yakhe. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba sikhumbule yonke idatha ephathelene ngomuntu othile. Ngo igama elithile, isidlaliso kungenzeka, usuku lokuzalwa kanye nomuzi kuzo nalezo aphila kuzo. Kufanele futhi ishiwo yelucwaningo. Iqiniso lokuthi akukho mahluko iyiphi ukusebenzisa futhi ngalokho isiphequluli ukusebenzisa kwabo. Umbuzo wosesho kufanele izobukeka ngale ndlela: "Vkontakte uMariya Potapova," noma "VC Masha Rasteryasha Pskov". Ivunyelwe mayelana nanoma ikuphi ukuhluka okungenzeka ngayo. Uma ikhasi msebenzisi efihlwe izilungiselelo zobumfihlo yosesho akuzona abasebenzisi yokuxhumana, isikrini sizobonisa eziningi izixhumanisi kusayithi lakho "Vkontakte". Umuntu ufuna abe phakathi kwawo.
Uma search khulula wanika lutho, kufanele sinake i-akhawunti ekhona noma ukusebenzisa iphrofayela yomngani. Okulandelayo, sibheke yamathuluzi ngakwesokunxele sephrofayela ikhasi. Kuzoba uhlu "Imilayezo" inkinobho, "Izithombe", njll Futhi cishe ngaso kakhulu phansi kuyinto umsebenzi "Izindaba". Udinga ukuya kuye, futhi iphaneli engenhla kwekhasi elivela ukungena "Ukucinga" kwesigaba, noma sebenzisa ikholomu "Abangane", ilungelo ephinde izinto ukuhlunga abasebenzisi. A ithuba elifanayo lapho, futhi phezulu, ngaphezu akhawunti isithombe, Nokho, owokuqala kuhlanganisa okukhethwa kukho okuseqophelweni. Manje kubalulekile sikhumbule waphinda lonke ulwazi eyaziwa okunokwethenjelwa mayelana into oyifunayo, bese uwabhala phansi. Leli phuzu lokugcina kubalulekile ngoba ezifana search okuningiliziwe abantu isekelwe esimisweni "ibonakala ngokufana ncamashí ebhaliwe." Ukuba ne-akhawunti "Vkontakte", umuntu ngeke akwazi ukuzifihla izilungiselelo zobumfihlo ulwazi oludingekayo noma cha ucacise nhlobo, yingakho ikhasi yakhe ngeke kwesokunxele ngokuzenzakalelayo. Ingabe kuhlanganiswe iqoqo idatha input. Ngakho, the line phansi search service "VKontakte" abantu kuza ngezindlela eziningi: ngokugcwalisa amabhokisi ulwazi oluyisisekelo, isithombe kanye nenombolo yocingo. Kungenzeka futhi ukuba sihlanganise, noma inkomba kanye nje.
"VKontakte": Ulwazi Basic
Manje kudingeka unqume ukuthi yini ezilungele kangcono ukuze lelisu search: esheshayo noma eziphambili. Uma izinhlamvu zokuqala umuntu BakaJehova baziwa, ungazama "express." Uma umsebenzisi ambone noma bakhulume uqobo nomuntu engaziwa, kufanele ufake idatha eyengeziwe ngesimo emzini, usuku lokuzalwa, esikoleni, ukutholakala imfundo ephakeme, ubulili kanye nobudala, kanye nesimo nomndeni kungenzeka.
Sesha izithombe kanye nenombolo yocingo
Uma ulwazi okuyinto ezazifunwa "VKontakte" abantu abangaziwa, ngaphandle ukuthi gama liyatholakala, kungenzeka ukuba bafake isigaba ekhethekile esibhalwe ukuthi "kuphela ngezithombe 'futhi baqale ukubheka umuntu usebenzisa imemori ezibukwayo. Uma ngokungazelelwe ngibabona eyodwa, ungakwazi ufake uchungechunge nombuzo kanye nenombolo yocingo. Kunezinhlobo ezimbili: nge 8 noma 7, kanye eziyisikhombisa. Uma inombolo ethile, bese umuntu iyophinde kungatholakala. Esimeni Amakhasi yakhe web eziningana ukulandelela ngokwanele, yimuphi kubo Wayethi angavela kaningi, bese ubhala umsebenzisi.
Yilokho izindlela eziyisisekelo lokuthola umuntu yokuxhumana nge kokubili ukubhaliswa futhi ngaphandle, kanye idatha eyengeziwe. Kuyinto pretty elula, uma ubheka.
Indlela yokuhumusha amavoti "VKontakte" nezinye. Kungani sidinga ukuvota futhi kanjani kubo
Tags for "Instagrama" ngoba ukuthandwa
Indlela yokwenza imali ku "Ofunda nabo" phezu "ikilasi"? Enta taba ubekezele!
Yekuchumana zendlela yokuthola abantu kulezi zithombe
Kuphi, uma beza Kazan. TC "Mega" - wonke umndeni
Siyaqonda ukuthi lokhu iphrofayli
Frensis Kobeyn - indodakazi abanamakhono nguyise edume
Mesotherapy izinwele: ukubuyekezwa ukusebenza
Tiga tenkhulumo - uyinto ngaphandle okuyinto ngolimi lwethu uzolahlekelwa imiva
Savings: Indlela ukuvala ilungelo credit card?
Ungabamba kanjani isikhumba se-Foam ku-foam? Indlela yokuqoqa kahle isikhunta kunoma iyiphi indawo
Stomatitis kwabadala. Ukwelashwa ekhaya ngempela ngempela
Njengoba kwatholakala isimiso kwefrakshini, futhi ukuthi lokhu kuthinta
Trukhanov Isiqhingi: ehlezi endaweni e Kiev